ktmkhabar.com - चितवनमा रेनुको अर्को चमत्कार, देशैभरका महानगरको भन्दा आकर्षक बजेट ल्याउँदै !
चितवनमा रेनुको अर्को चमत्कार, देशैभरका महानगरको भन्दा आकर्षक बजेट ल्याउँदै !
भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि रु ६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । यही असार १० गते शुक्रबार नगर परिषद् हुँदै छ ।
उनले भने, ‘हामी रु ६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछौँ ।’ बजेट पूर्व महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूसँग छलफल र सुझावसमेत लिएको थियो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विशिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी रहेका थिए । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा यो बजेट देशैभरका महानगरहरुको भन्दा आकर्षक उत्कृष्ट बजेट रहेको अनुमान लगाउन थालिएको छ।